Quartz with marcasite waa gemstone dhif ah - Iron iron pyrite - fiidiyow
Soo iibso dukaannada 'quartz dabiiciga ah' marcasite dukaankayaga
Quartz with marcasite waa gemstone dhif ah. Marcasite iyo “quartz” caadi ahaan waa la helaa si kala gooni gooni ah, laakiin marar dhif ah ayaa wadajira.
Maaddada macdanta ee loo yaqaan 'marcasite macdanta', oo mararka qaar loo yaqaanno bir-cad cad bir, waa bir-biriside (FeS2) oo leh qaab orthorhombic ah. Waxay jir ahaan iyo garaaf ahaan ka duwan tahay pyrite, oo ah bir bir-badeed leh qaabdhismeedka dhagxaanta qaaliga ah. Labada qaabdhismeedku waxay leeyihiin si isku mid ah inay ku jiraan masiibada 'S22 ion' oo leh masaafo gaaban oo isku xirid ah oo u dhexeysa atamyada baaruudda ah. Qaab dhismeedyadu way ku kala duwan yihiin sida loo sameeyo 'di-anions' kuwan loo diyaarshay agagaarka feeraha 'Fe2 +. Marcasite waa ka fudud oo ka jilicsan kan pyrite. Muunadaha loo yaqaan 'marcasite' marcasite ayaa inta badan burbura oo u burburaya qaab dhismeedka dhagxaanta aan xasilloonayn.
Dusha sare, waxay u egtahay hurdi midabkeedu casaan yahay in u dhow caddaan waxayna leedahay iftiin bir macaan oo dhalaalaysa. Wuxuu u gudbaa midab jaalle ah ama bunni ah wuxuuna bixiyaa dheecaan madow. Waa shey jilicsan oo aan mindi lagu xoqin karin. The khafiifka ah, guri, kiristaalo tabular, markii lagu daro kooxaha, waxaa loo yaqaan cockscombs.
Quartz waa macdan adag, macdanta kirismaska ​​oo ka kooban silikon iyo atom oksijiin ah. Atamku wuxuu ku xiran yahay qaab si isdaba joog ah u ah SiO4 silsilad oxygen tetrahedra, iyadoo oksijiin kasta la wadaago inta u dhexeysa laba tetrahedra, isaga oo siinaya qaaciddada kiimikada guud ee SiO2. Quartz ayaa ah macdanta labaad ee ugu badan ugurmada qaaradaha adduunka, oo ka dambeysa feldspar.
Quartz oo leh macnaha marcasite
Kahortaga tamarta taban.
Waxay ka caawisaa inuu galo maskaxda miyirka.
Waxay hubisaa farxadda qoyska.
Waxay ku lug leedahay awooda bogsashada ee kala badh.
Waxay kobcisaa tamarta wanaagsan.
Kordhinta is-ixtiraamka iyo kalsoonida haweenka.
Ku wanaagsan xoojinta hal abuurka.
Hagaajinta awooda lagu fahmo waxyaabaha.
Ku fiican awoodaha maskaxda.
Quartz oo leh Marcasite / Microscope x 10